Go’aan laga soo saaray xilliga uu furmayo kalfadhiga 2aad ee golaha shacabka (AKHRISO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Go’aan laga soo saaray xilliga uu furmayo kalfadhiga 2aad ee golaha shacabka (AKHRISO)
Kullan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen guddiga joogtada ah ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ku go’aamiyeen xilliga uu furmayo kalfadhiga 2aad ee golaha shacabka.
Kullankaasi oo uu shir guddoominayey ku-simaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa waxaa looga hadlay ajandeyaal dhowr ah oo ay ugu horeeyso mudeynta xilliga uu furmaayo kalfadhiga 2aad ee golaha shacabka maadaama ay mudaneyaasha hadda ku maqan yihiin fasaxooda dastuuriga ah.
Xoghayaha guud ee golaha shacabka Mudane C/kariin Xaaji Cabdi (Buux) oo ka hadlay qodobbada looga hadlay kullanka guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ayaa sheegay in guddiga joogtada ahi ay go’aamiyeen in furitaanka kalfadhiga 2aad ee golaha shacabka loo mudeeyey inuu noqdo 08-July-2017.
Sidoo kale, xoghayaha guud ee golaha shacabka Mudane C/kariin Buux ayaa ku wargeliyey dhammaan xildhibaannada golaha shacabka ee fasaxa ku maqan inay usoo diyaar garoobaan furitaanka kalfadhiga 2aad ee golaha shacabka.
Dhinaca kale, guddiga joogtada ah waxay kullankooda uga hadleen howlaha horyaala golaha iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin, waxaana howlahaasi ka mid ah ammaanka, dib u eegista miisaaniyadda, guda gelidda dhameystirka dastuurka, dhameystirka sharciyadii ka yimid baarlamaankii 9aad iyo qodobo kale.